Qaxootiga oo deeq ballaaran loo fidinayo - BBC Somali
Qaxootiga oo deeq ballaaran loo fidinayo
16 Luulyo 2011
Image caption Xoghayaha horumarinta caalamiga ah ee Britain, Andrew Mitchell
Xoghayaha horumarinta caalamiga ah ee dalka Britain, Andrew Mitchell, ayaa booqanaya dalka Kenya si uu indhahiisa ugu soo arko heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada abaarta ee saameynaysa gobolka woqooyi bari Kenya.
Qaybo badan oo ka mid ah Afrikada bari iyo geeska Afrika dad lagu qiyaasay toban milyan oo qof ayaa waxaa haysa abaartii ugu ba'nayd ee gobolkaas ku dhufata mudddo 60 sano ah. Mr Mitchell waxaa uu booqday xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo toddobaad walba ay soo gelayaan kumannaan qaxooti ah oo ka soo cararaya abaarta Soomaaliya, waxaana uu ku dhawaaqay gargaar ku kacaya 80 milyan oo dollar oo dowladda Ingiriisku siinayso dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya.
Isagoo BBC-da arrintaas uga warramayay waxaa uu yiri''Britain waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee dadkan mucaawinada u fidiya mana ahan xeradan oo keliya oo iyada sannado badan aan wax siinaynay annagoo u soo marinaynay hay'ado samafal oo ay ka mid tahay save the children oo halkan ka shqeysa, kamana hawl gelayn oo keliya woqooyiga kenya ee waxaan sidoo kale ka sahqeynaynay gudaha Soomaaliya iyo gudaha Itoobiya. Waxaana hadda loo baahan yahay in beesha caalamka inteeda kale ay ka soo qayb galaan mucaawinada si looga badbaado masiibo bani'aadanimo inay dhacdo. Waa lagama maarmaan in caalamka oo dhan, dowladaha, hay'adaha caalamiga ah, qaramada midoobay ay ka wada qayb galaan sidii wax loogu qaban lahaa dadkan sida aadka ah u baahan''.